Fri, Jul 10, 2020 at 7:11pm
बिरामी ऋषि कपूरको इच्छा, रणबीर–आलियाको धुमधामले विवाह
एजेन्सी, २३ फागुन । बिरामी परेका बलिउड स्टार ऋषि कपूर अहिले उपचारको लागि अमेरिकामा छन् । लामो समय उपचार गराएका उनी यहि मार्चको अन्ततिर भारत फर्किने बताइएको छ । भारत आउनसाथ उनको पहिलो इच्छा छोरा रणबीर कपूरको विवाह रहेको भनिएको छ । पाँच महिना पहिले देखि उपचाररत उनले आफ्नो रोगको बारेमा सार्वजनिक रुपमा बताएका भने छैनन् । यसअघि उनलाई क्यान्सर भएको खबर बाहिरिएपनि..
बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको शरीरमा आगो लागेपछि
एजेन्सी, २२ फागुन बलिउड चर्चित अभिनेता अक्षय कुमार डिजिटल प्लेटफार्ममा डेब्यू गर्दैछन् । उनी चाँडै एउटा स्टंट बेस्ड शोमा देखिँदैछन्। मंगलबार मुम्बईमा उनले आफ्नो पहिलो वेब शो को लन्च गरे। सो क्रममा अक्षयले आफूलाई आगो लगाएर रेम्प वाक गरेर देखाए। अक्षय स्वंयले यो भिडियो शेयर गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘ पूरै आगोमा मेरो नयाँ शो ‘द एण्ड’ (वर्किङ टाइटल) का लागि..
नयाँ रिलेसनशीपलाई लिएर उत्सुक कंगना रनावत
एजेन्सी, २१ फागुन बलिउड अभिनेत्री कंगना रनावत नयाँ रिलेसनशीपलाई लिएर उत्सुक छिन् । पछिल्लो समय ऋतिक रोशनसँगको प्रेम सम्बन्ध र त्यसले सार्बजनिक रुपमा ल्याएको विवादपछि सिंगल रहेकी कंगनाले आफ्नो जीवनमा कसैको प्रवेश भएको भन्दै नयाँ रिलेसनशीपबारे खुलासा गरेकी छन् यद्यपी उनले त्यो ब्यक्ती को हो नाम भनिसकेकी छैनन् ।’एक्लोपन हटेको छ त्यसैले म हर्षित छु’ कंगनाले भनिन् । बलिउड अभिनेत्री कंगना रनावत कुनै..
'साइँली' चलचित्र को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौँ, १९ फागुन नायकद्वय गौरव पहारी र दयाहाङ राई अभिनीत चलचित्र 'साइँली'को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। चलचित्रको ट्रेलर ओएसआर डिजिटलको युट्युबमार्फत आइतबार रिलिज भएको हो। यसअघि चलचित्रका दुई गीत सार्वजनिक भएका थिए। चलचित्रमा नायिकाको रुपमा मेनुका प्रधान र केनिपा सिंहको अभिनय रहेको छ। चलचित्रलाई ’कबड्डी’ फेम निर्देशक रामबाबु गुरुङले निर्देशन गरेका छन्। 'साइँली'को कथा पनि निर्देशक गुरुङ आफैले लेखेका हुन्।..
'आफ्नो करिअरमा पैसाले अर्थ राख्दैन, म ल्यान्डमार्क फिल्म गर्न चाहन्छु'
काठमाण्डौ, १६ फागुन पछिल्लो समयमा सर्वाधिक डिमान्डेड, महँगा र चर्चित अभिनेता हुन् अनमोल केसी । शहरिया युवापुस्तामा उनको क्रेज लोभलाग्दो छ । यही कारण नै हो उनले मागे जति पारिश्रमिक दिन फिल्ममेकर्स तयार हुन्छन् । अनमोलको नामले नै फिल्म चल्छ भन्ने मान्यता उनीहरुमा छ । र, यो देखिएको पनि छ । केही समययता उनले ५० लाख पारिश्रमिकको अफर आएका अनगिन्ती फिल्म लत्याइसकेका छन्..
अन्तत: मलाइकाले स्वीकार गरिन् अर्जूनसँगको प्रेम सम्बन्ध
एजेन्सी, १४ फागुन मलाइका अरोडा र अर्जुन कपूर आफ्नो रिलेशनसिपलाई लिएर गएको लामो समयदेखि लगातार चर्चामा छन् । दुबैले यो सम्बन्धलाई खुलेर कहिल्यै स्वीकार गरेका छैनन् । तर, सामाजिक सञ्जालमा लामो समयदेखि भाइरल भइरहेका तस्वीरहरुले भने उनीहरुको प्रेम सम्बन्धको वर्णन गर्छन् । फ्यानहरुलाई लामो समयदेखिको पर्खाइ थियोकी उनीहरु दुबैले खुलेर आफ्नो सम्बन्धबारे जानकारी दिउन् । अब त्यो समय आएको छ । करण जौहरको..
अवार्ड समारोहमा साराअली खानको बोल्ड अवतार
एजेन्सी, ९ फागुन आफ्ना सुरुवाती दुईआटै फिल्म हिट भएपछि अहिले बलिउड नायिका साराअली खानको चर्चा निकै चुलिएको छ । चलचित्र ‘केदारनाथ र सिम्बा’को सफलतापछि एकाएक स्टारको सूचीमा परेकी उनी मिडियाले पछ्याउन थालेपछि उनी पहिरनमा पनि सजग हुन थालेकी छन् । बुधबार मुम्बईमा आयोजना भएको ‘फेमिना ब्यूटी अवार्ड’ समारोहमा सारा पिंक पहिरनमा पुगेकी थिइन्। उक्त पहिरनमा उनी निकै बोल्ड पनि देखिएकी छन्। अवार्डमा..
सलमान खानले पाकिस्तानी गायकलाई नै हटाए
काठमाडौँ, ६ फागुन सलमान खानले आउँदै गरेको चलचित्र ‘नोटबुक’ बाट पाकिस्तानी गायक अतिफ असलमलाई निकालेका छन् । यो चलचित्रको निर्माता हुन् । यो भन्दा अगाडि टिसिरिजले अतिफको गीत युट्युबबाट अनलिस्ट गरेको थियो । पुलवामा आक्रमणपछि बलिउडमा भएका पाकिस्तानी कलाकारहरु रिसको शिकार भइरहेका छन् । ..
अक्षय कुमारद्वारा पुलवा हमलामा निधन भएका सैनिकका परिवारलाई ५ करोड सहयोग
एजेन्सी, ६ फागुन बलिउड नायक अक्षय कुमारले पछिल्ला केही बर्षयता खेलेका चलचित्रलाई हेर्ने हो भने, उनी राष्ट्रियता बोकेका कथामा बढी केन्द्रित छन् । उनै, अक्षय कुमार भारतमा विभिन्न समयमा च्यारेटी गर्न पनि अगाडि छन् । भलै, उनी आफूले गरेको च्यारेटीको प्रचार पनि खुलेरै गरिदिन्छन् । केही दिन अगाडि मात्र भारतको पुलवामा भएको हमलामा ४० जना भन्दा बढी भारतीय सैनिकको निधन भएको..
सारा अली खानले आमा अमृता सिंहको घर छाड्नुको कारण यस्तो :
एजेन्सी, २ फागुन आफ्ना सुरुवाती दुई फिल्म हिट भएर चर्चामा आएकी बलिवुड नायिका सारा अली खान अन्य बिभिन्न कारणबाट कारणबाट पनि चर्चामा आउने गर्छिन्। अहिले साराको यस्तै एक तस्वीर बाहिर आएको छ। तस्वीरमा उनले आफ्नो सामान कारको डिक्कीमा राखेको देखिएको छ। खबर अनुसार साराले आफ्नी आमा अमृता सिंहको घर छाडेकी छन्। अमृता सिंहको घर बाहिर उनले कारमा सामान राखिरहेको तस्वीरमा देखिएको छ। आजभोली..
एकैदिन ३ फिल्म : ‘गोपी’, ‘सय कडा दश’ र ‘रणवीर’मा कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं, माघ १८ माघ १८ अर्थात् शुक्रबारदेखि हलमा तीन नेपाली चलचित्र प्रदर्शनमा आएको छ । गाईपालक युवाको कथामा बनेको ‘गोपी’, मनोज गजुरेलको डेब्यू ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रेम’को नारा बोकेको चलचित्र ‘सयकडा दश’ र दक्षिण भारतीय शैलीमा बनेको एक्सन, लभस्टोरी ‘रणवीर’ मैदानमा उत्रिएका हुन् । वीपिन कार्की, वर्षा राउत, सुरक्षा पन्त लगायतको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ‘गोपी’लाई चलचित्र समीक्षक तथा रंगपत्रकार दीपेन्द्र लामाले निर्देशन गरेका..
हलमै तोडफोड भएपछि रोकियो ‘द एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर’को शो
एजेन्सी, २९ पुस शुक्रबारदेखि रिलिज भएको चलचित्र ‘द एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर’को शो रद्द भएको छ । कोलकक्ताको हलमा विरोध प्रदर्शन तथा तोडफोड भएपछि उक्त चलचित्रको शो रोकिएको हो । यो चलचित्र पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको जीवनीमा आधारित रहेर निर्माण भएको छ । कांग्रेसका युवा कार्यकर्ताको विरोधमा यस चलचित्रको उत्तर कोलकत्ताको स्टार थिएटर, मध्य कोलकत्ताको रोक्सी एण्ड प्राची थिएटर, दक्षिण कोलकत्ताको मेनका थिएटर..
मनोरञ्जन उद्योगमा विश्वकै ठूलो कम्पनी डिस्नेको आम्दानी ७ अर्ब डलर, २०१८ को विश्वव्यापी चलचित्र !
लस एन्जलस, १९ पुस मनोरञ्जन उद्योगमा विश्वकै ठूलो कम्पनी डिस्नेले लगातार दोस्रो वर्ष सन् २०१८ मा करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार गरेको छ । डिस्नेले सन् २०१८ मा विश्वव्यापी रुपमा चर्चित “ब्लाक प्यान्थर”, “एभेन्जर्सः इन्फिनिटी वार” देखि एनिमेटेड सिक्वेल चलचित्र “इन्क्रेडिबल २” र पछिल्लो “स्टार वार्स” चलचित्र बजारमा ल्याएको थियो । बक्स अफिसमा वार्षिक ७ अर्ब डलरभन्दा बढी आर्जन गर्ने विश्वकै..
किरात-राई संस्कृतिमा आधारित चलचित्र “सायाबुङ” कोरियामा प्रर्दशन हुँदै
काठमाडौँ, १८ पुस किरात-राई संस्कृतिमा आधारित चलचित्र “सायाबुङ” कोरियाको राजधानी सौलमा यही जनवरी १३ तारिकका दिन मिलिजुलि सहयोगी मनको पहलमा प्रर्दशन हुने भएको छ । सोही अवसरमा यस चलचित्र राजधानी लगायत अन्य दुई ठाउमा पनि प्रर्दशन गर्ने योजना तय भएको जानकारी दिईएको छ । हिमाली भेगमा गोठ बसाएर जीवन निर्वाह गर्ने गोठालो र किराँती बस्ति बिचको माया प्रेम ,सँस्कार सस्कृति तथा रहनसहनलाई समेत समावेश गरिएको..
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बायोपिक फिल्म बन्ने पक्का, विवेक ओवराय मोदीको भूमिकामा
काठमाडौं, १५ पुस । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जिवनमा आधारित फिल्म बन्ने भएको छ । फिल्मको शूटिंग २०१९देखि शुरु गरिने र फिल्मलाई उमंग कुमारले निर्देशन गर्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीको जीवनीमाथि बनाइन लागिएको फिल्ममा विवेक ओवरायले प्रधानमन्त्रीको भूमिका निभाउने भएका छन् । फिल्मको शूटिंग दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश र उत्तराखंडमा गरिने भएको छ । खवरअनुसार विवेकले फिल्ममा दिइने भूमिकाको लागि तयारी..
चलचित्र ‘फ्रड सइयाँ’को ट्रेलर रिलिज, यस्तो रूपमा देखिए अरशद वारसी (भिडियो)
मुम्बई, १३ पुस । अभिनेता अरशद वारसी अभिनीत चलचित्र ‘फ्रड सइयाँ’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। चलचित्रको ट्रेलर टिप्स अफिसिएलको युट्युबमार्फत शुक्रवार रिलिज भएको हो। केही दिन अगाडि चलचित्रको ‘छम्मा छम्मा’ बोलको गीत रिलिज भएको थियो । करिब २० वर्ष पहिले आएको फिल्म 'चाइना गेट'मा समावेश गरिएको उक्त गीत चलचित्र ‘फ्रड सइयाँ'मा रिमिक्स भर्सनमा राखिएको छ। चलचित्रमा सौरभ सुक्ला, एली अवराम र सारा लॉरेनलगायतको..
'सिम्बा'को नयाँ गीत सार्वजनिक, सँगै देखिए अजय र रणवीर बर्दीमा [भिडियो सहित]
मुम्बई, ११ पुस । बलिउड स्टार रणवीर सिंह अभिनीत चलचित्र 'सिम्बा'को नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । डिसेम्बर २८ मा रिलिज हुने चलचित्रको नयाँ गीत 'मेरा वाला डान्स' टिसिरिजको युट्युब च्यानलमार्फत बुधबार सार्वजनिक भएको हो । गीतमा स्वर नेहा कक्कर र नकाश अजिजको रहेको छ भने सङ्गीत लीजो गर्ज र डिजे चेतसको रहेको छ। गीतको शब्द कुमारले लेखेका हुन्। अजय देवगणको चलचित्र 'सिंघम'बाट..
शाहरुखको ‘जीरो’लाई रुचाएनन् दर्शकले, सामाजिक संजालमा उडाइयो खिल्ली
एजेन्सी, ७ पुस शाहरुख खान, कट्रिना कैफ र अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म जीरोलाई दर्शकले रुचाएनन् । पहिलो दिन फिल्मले धेरै नकारात्मक प्रतिक्रिया पायो । फिल्मलाई भारतमा ४ हजार ३८० र विदेशमा १५८५ स्क्रिनमा एकैपटक रिलिज गरिएको थियो । फिल्म समीक्षकको तर्फबाट फिल्मले कुनै राम्रो र उल्लेख्य प्रतिक्रिया पाएको छैन । फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्शले फिल्मलाई निराशाजनक भनेका छन् र उनले फिल्मलाई..
शाहरुखको ‘जीरो’लाई टक्कर दिंदै बाहुबली’झैं भव्य फिल्म ‘केजीएफ’
एजेन्सी, ६ पुस शुक्रबार ठूलो पर्दामा दुई ठूलो बजेटका फिल्म आउँदैछन् । ठूला स्टारको र विशेष फिल्म भएकोले यी दुई फिल्मबीच कडा टक्कर हुने देखिएको छ । एकातिर आव शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा र कट्रिना कैफको फिल्म ‘जीरो’ रिलिज भएको छ, अर्कोतर्फ साउथका सुपरस्टार यशको फिल्म केजीएफ अर्थात कोलार गोल्ड फिल्डस पनि आजै रिलिज भएको छ । जीरोको टिमले फिल्मको प्रमोसनको लागि..
कंगनाको ‘मणिकर्णिका’ विवादित बन्दै, पात्र, प्रवृत्ति र दृश्य हुवहु मिलेको भन्दै आलोचना
एजेन्सी, ५ पुस कंगना यस्ती अभिनेत्री हुन्, जसले फिल्ममा आफ्ना पुरुष को-स्टारभन्दा बढी पारिश्रमिक लिने गर्छिन् । यसअघि उनले शाहिद कपुरलाई उछिनेर बढी पारिश्रमिक लिएको चर्चाले बलिउड तातिएको थियो । ठिक सोही समयमा उनले ऋतिक रोशन लगायत बलिउड अभिनेताहरुसँग जोडेर केही विवादित तर्कहरु पेश गरिन् । यसले उनलाई फाइदा होइन, बेफाइदा भयो । एकपछि अर्को विवादमा तानिदै र झुट सावित हुँदै..
डिसेम्बर २९ देखि प्रशारण हुँदै 'द कपिल शर्मा शो' (टिजरसहित)
एजेन्सी, ४ पुस कपिल शर्माका फ्यानहरुको लागि सु: खद् खबर छ। दर्शकलाई हँसाएरै आफनो फ्यान बनाएका कमेडि किङ कपिल शर्माको बन्द भएको 'द कपिल शर्मा शो' पुनः प्रशारण हुने भएको छ। करिब तीन वर्ष अगाडि बन्द भएको उनको यो शो आउँदो डिसेम्बर २९ तारिखदेखि पुनः प्रशारण हुन लागेको हो। भारतको टिभी च्यानल सोनी टिभीले आफ्नो आधिकारिक सामाजिक संजाल ट्वीटरमा कपिलको शोको टिजर पोष्ट..
दुर्व्यवहार गरेको भन्दै प्रशंसकलाई 'तोरीको फुल देख्ने गरी' झापड हानेपछि ...
एजेन्सी, ३ पुस शुक्रबार एक पसलको उद्घाटनका लागि औरंगाबाद पुगेकी नायिका जरिन खानले एक व्यक्तिलाई झापड हानेकी थिइन् । उक्त घटनाको एउटा भिडियो सार्वजनिक भएपछि नायिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको थियो । यसबारे अब नायिकाले स्पष्टीकरण दिएकी छिन् । उनका अनुसार भीडको फाइदा उठाएर ती व्यक्तिले नायिकामाथि दुर्व्यवहार गरेका थिए । यो हो नायिकाको आरोपः पसलको उद्घाटनका लागि औंरगाबाद पुगेकी नायिका जरिन खानमाथि एक..
तनुश्री दत्ता अमेरिका फर्किंदै, नाना पाटेकरको मुद्दा के भयो ?
एजेन्सी, २ पुस बलिउडमा ‘मीटू’ अभियानको सुरुवात गर्ने अभिनेत्री तनुश्री दत्ता अमेरिका फर्कन लागेकी छिन् । उनले ‘मिड डे’लाई दिएको एक अन्तरवार्तामा आफू न्यूजर्सी फर्किन लागेको कुराको खुलासा गरेकी हुन् । तनुश्रीले भनेकी छिन् ‘केरो भविष्य त्यहीँ छ तर म अर्को वर्ष छिट्टै फर्किनेछु । जब म मुम्बइ आएकी थिएँ त्यतिबेला मैले सोचेकी थिएँ कि एक हिनामै फर्केर जानेछु । तर..
‘२.०’ले कमायो ७ सय करोड, बक्स अफिस टप कलेक्सनको चौँथो नम्बरमा
एजेन्सी, १ पुस चर्चाको शिखर चुमेको चलचित्र “२.०”ले कमाइ पनि आक्रमक गरिरहेको छ । सन् २०१० मा रजनीकान्त र ऐश्वर्या राय बच्चनको सुपरहिट फिल्म ‘रोबोट’ को सिक्वेल “२.०”को ट्रेलरले समेत निकै प्रशंसा बटुलेको थियो । बलिउड सुपरस्टार अक्षय कुमार र रजनीकान्तको फिल्म “२.०” ले प्रदर्शनको पहिलो हप्तामा विश्व भरीमा नै पाँच सय करोडभन्दा बढी कमाई गरेको थियो ।”२.०”ले बक्स अफिसको कलेक्सनमा..
साहित्यकार झमककुमारी घिमिरेको कृतिमा आधारित ‘जीवन काँडा कि फूल’ चलचित्र निर्माण
काठमाडौँ, २८ मङ्सिर : साहित्यकार झमककुमारी घिमिरेको ‘जीवन काँडा कि फूल’ कृतिमा आधारित चलचित्र निर्माण भएको छ । चलचित्रमा रोजिता बुद्धाचार्य, किसन सुनार, उमा गिरीलगायत कलाकारले अभिनय गर्नुभएको छ भने गायिका जुनु गौतमले गीत गाउनुभएको छ । करीब दुई घण्टा समयावधिको उक्त चलचित्रको छायाङ्कन धनकुटास्थित घिमिरेको निवासस्थल तथा धरान र ललितपुरमा गरिएको छ । विनोद विष्टले निर्माण गर्नुभएको चलचित्रमा घिमिरेको सङ्घर्षका साथै उहाँले..
बलिउड हिरोइन जरीन खानको गाडी दुर्घटना, आफू घाइते भइन्, अर्का एकजनाको मृत्यु
एजेन्सी, २७ मङ्सिर बलिउड अभिनेत्री जरीन खानको कार दुर्घटना भएको छ । दुर्घटनामा एक मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ । दुर्घटना गोवाको मापूसा क्षेत्रमा भएको हो । दुर्घटनामा जरीन घाइते भएकी छिन् । उनलाई पणजीको एक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । घटना बुधबार राती ६ बजेर २० मिनेटको समयमा भएको बताइएको छ । जरीन विदा मनाउनको लागि गोवा पुगेकी हुन् । बेलुका..
भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई प्रस्तुत गर्दै ‘सय कडा १०’ चलचित्र निर्माण हुने
पोखरा, २६ मङ्सिर समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई प्रस्तुत गर्दै त्यसको न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्यका साथ ‘सय कडा १०’ चलचित्र निर्माण हुने भएको छ । आगामी माघ १८ गते प्रदर्शनमा ल्याउने गरी चलचित्र निर्माण कार्य अघि बढिरहेको बुधबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चलचित्रका लेखक एवं निर्देशक रामशरण पाठकले जानकारी दिए । “युवालाई नेपाल र नेपाली माटो बुझाउँदै समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचारले पारेको प्रभावलाई चलचित्रमार्फत..
सारा अलि खान भन्छिन् : ‘मलाई बक्स अफिसले फरक पार्छ’
एजेन्सी, २५ मङ्सिर चलचित्र ‘केदारनाथ’बाट बलिउडमा प्रवेश गरेकी नायिका सारा अली खानले आफूलाई बक्स अफिस कलेक्शनले फरक पार्ने बताएकी छिन् । साराको डेब्यू चलचित्र ‘केदारनाथ’ अहिले हलमा चलिरहेको छ । यो चलचित्रले बक्स अफिसमा राम्रो कमाई पनि गरिरहेको छ । चलचित्रले बक्स अफिसमा राम्रो कलेक्शन गरिरहेको समयमा नायिकाले आफूलाई बक्स अफिसले धेरै नै प्रभाव पार्ने बताएकी छिन् । साराले आफूलाई बक्स अफिसको..
प्रियंका लगातार ट्रोलको सिकार, क्रिस्चियन संस्कारअनुसार बिहे गर्न १८ फिट अग्लो केक !!
काठमाडौँ, २४ मङ्सिर प्रियंका चोपडा र निक जोनसको विवाह दुई रीतिअनुसार भयो । विवाहको तस्बिरमा प्रियंकाको वेडिङ गाउन, लेहेंगादेखि विवाहको तयारीसम्मको चर्चा भइरहेको छ । उनी लगातार ट्रोलको सिकार पनि भइरहेकी छिन् । विवाहको उत्सव मनाउँदा क्रिस्चियन रीतिअनुसार १ डिसेम्बरमा प्रियंका र निकको विवाह भयो । त्यसपछि विवाह उत्सव मनाइएको थियो । ट्विटरमा फ्यानहरूलाई यो कुरा त्यति रुचेन र उनी विवाहको दिन नै..
मिका सिंह पक्राउ परेपछि राखी सावन्तको नौटंकी, छाडा बोल्दै पोस्ट गरिन् यस्तो भिडियो
काठमाडौँ, २३ मङ्सिर बलिउडका चर्चित गायक मिका सिंह पक्राउ परेका छन् । दुबईमा मिकालाई युवतीसँग अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ । १७ वर्षकी ब्राजिलियन मोडलले मिकामाथि यौनशोषणको आरोप लगाएकी छिन् । मिका पक्राउ परेको बारेमा राखी सावन्तले थाहा पाएपछि उनले सामाजिक संजालमा भिडियो पोस्ट गरिन् । भिडियोमा राखीले आफू मीकालाई छुटाउन दुबइ आउन लागेको बताएकी छिन् । यस बीचमा राखीले..
Results 550: You are at page7of 19